थाहा खबर: 'कांग्रेस कुनै पनि कम्युनिस्ट घटकको नेतृत्वमा सरकारमा जानु हुँदैन'
'कांग्रेस कुनै पनि कम्युनिस्ट घटकको नेतृत्वमा सरकारमा जानु हुँदैन'
काठमाडाैं : नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले कुनै पनि कम्युनिष्ट घटकको नेतृत्वको सरकारमा जान नहुने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेस ओखलढुंगाले स्वर्गीय नेता मित्रसेन दाहालको १३ औँ पुण्यतिथिमा काठमाडौंमा बुधबार गरेको श्रद्धाञ्जलि सभामा महतले कम्युनिष्ट घटकको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा जान नहुने र सरकारको नेतृत्वको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था आए कांग्रेसले लिनुपर्ने तर्क गरे। उनले कांग्रेसको नेतृत्व सहज स्वीकार गर्नेसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बताए।
‘अहिले नेपाली कांग्रेस पार्टीचाहिँ पर्ख र हेरको नीतिमा छ। यद्यपि धेरै समयसम्म पर्ख र हेर गरिरहन सक्दैनौँ। २३ गते संसदको बैठक छ। बैठकको पहिलै दिन सबै टुंगिने पनि होइन। बैठकको प्रारम्भ हो। त्यसपछि कम्युनिष्ट पार्टी कसरी, दुईवटा घटक कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यसलाई हेरेर नेपाली कांग्रेसले आफ्नो रणनीति बनाउनुपर्छ। अहिले नै हौसियर फलानोसँग समीकरण गर्ने भन्यौ भने त्यो अपरिपक्व हुन्छ। त्यो गुट ओली जुट्छ कि? त्यो पनि प्रयास भएका छन्। देशी विदेशी सबै प्रयासहर संलग्न छन्।'
सरकार निर्माणमा नेपाली कांग्रेसको भूमिकाको आवश्यकता पर्‍यो भने कांग्रेसले निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले भने, 'निर्णय गर्न नेपाली कांग्रेस सक्षम छ।'
तर नेपाली कांग्रेसले नै नेतृत्वको जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवश्यकता प¥यो भने त्यो हामिले लिनुपर्छ। फलानो सँग चाहिँ गर्नुपर्छ फलानो सँग चाहिँ हुँदैन भन्ने बहस छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व जसले स्वीकार गर्छ त्यसमा हामिले यो पक्ष ऊ पक्ष भनिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार र सहज शर्तमा।’
डोटीमा बेवारिसे अवस्थामा महिलाको शव फेला
एकाध देशले तोकेकाे वैश्विक नियम मानिँदैन : सी